रोचक – Sudur Sanchar
छिटै पलसँगको वास्तविक यथार्थ बाहिर ल्याउँछु-गायिका समीक्षा अधिकारी
गायिका समीक्षा अधिकारीले अभिनेता पल शाहसँगको आफ्नो सम्बन्धको वास्तविक यथार्थ बाहिर ल्याउने बताएकी छन्। सामाजिक संजालमा बिहिबार एक पोष्ट गर्दै उनले यस अगाडि २४ अक्टुबर २०२१ मा सार्वजनिक आफ्ना अभिव्यक्ति वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेको र कसैको अनुनयमा लेखिएको बताएकी छन्। उनले २४ अक्टोबर २०२१ मा लेखिएको स्टाटस सहित एक पोष्ट गर्दै भनेकी छन् ‘म लामो केही भन्दिनँ। २४ अक्टोबर २०२१ मा मेरो फेसबुकमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ। जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिएँ। अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउँदैछु।’ गत २४ अक्टोबरमा उनले पल र आफ्नोबीच अभिभावकको सम्बन्ध भएको भन्दै मिडियामा आएको अन्तरंग सम्बन्धको समाचारले चरित्रहत्या भएको बताएकी थिइन्। तर बिहिबारको पोष्टपछि उनले शो स्टाटस नै झुट भएको बताएकी हुन्। मिडियाले पलसँग जोडेर आफ्ना बिभिन्न समाचार र गसिफ लगातार बनाएपछि उनले फेसबुकमार्फत
कुकुरले नाचेर नै मानिसलाई पल्दै आएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । सामान्यतया कुकुर घर पालुवा जनावारमा पर्छ । तर एक कुकुरले दुई बृद्धअबश्था भएका मानिसलाई पाल्दै आएको घटना साचो हो । ७० वर्षका बुवा र ६७ वर्षकि आमा अहिले आफुहरुलाई कुकुरले पाल्दै आएको बताउछन । पहिले आफ्ना छोराछोरी कोहि नहुदाँ त्यहीँ कुकुरलाई नै आफ्नो छोरा सम्झेर पाल्दै आएको तर अहिले यहि कुकुरले नै आफुहरुलाई पाल्दै आएको बवाले बताएका छ्न । विभिन्न ठाउँमा कुकुर गोरेले नाचेर पैसा कमाउने गरेको उनले बताए । अहिले यहि कुकुरले नाचेर कमाएको पैसाले नै आफुले श्रीमतिको औषधि उपचार पनि गर्दै आएको ति बुवाले बताएका छ्न । आफ्नो कुकुर सबै कुरा बुझ्ने भएको उनले बताए । अहिले त आफ्नै सन्तान जस्तै भएको र आफुहरुको दुख कुकुरले देख्न नसक्ने बुबाको भनाई छ । आफुहरुको छोराछोरी जे भने पनि बाच्ने सहारा यहीँ गोरे नै बनेको बुवाले बताउँछन ।
नेपालीलाई विश्वभर ‘वीर गोर्खाली’ भनेर चिनिन्छ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन गोर्खा सैनिकहरुको पनि ठूलो हात छ । गोर्खा सैनिककै कारण नेपालले फेरि अर्को रेकर्डमार्फत आफूलाई विश्वभर चिनाउने सौभाग्य पाएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिककी छोरी बेलायती सेनाको एक उच्च पदमा पुगेकी छन् । कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–२२ भुम्दीकी २७ वर्षीय अंशु गुरुङ बेलायती सेनाको क्याप्टेन पदमा भर्ती भएकी छन् । यस्तै ,एसोसिएशन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट (एसीसीए)को परीक्षामा नेपाली विद्यार्थी रिया मानन्धर विश्वकै उत्कृष्ट बनेकी छन्। उनले गत डिसेम्बर २०२१ मा लिएको कर प्रणालीको परीक्षामा संसारभरका १३ हजार विद्यार्थीलाई उछिनेकी हुन्। यस परीक्षामा सहभागी ६ हजार चार सय विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। २० वर्षीय मानन्धर हाल ब्रिटिश प्रोफेसनल कलेजमा अध्ययनरत छन्, जुन एसीसीएको सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो।
Jan82022 by Bibek PoudelNo Comments
परिक्षा छुटाएर पार्टीकाे कार्यक्रममा नाच्न लगियो विद्यार्थी
सल्यान : सल्यानकाे दार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ढाकाडम काेटमा रहेकाे नेपाल राष्ट्रिय माविका विद्यार्थीहरुलाइ परिक्षा छुटाएर पार्टीकाे कार्यक्रममा लगिएकाे छ । एमाले सल्यानकाे नवाैं राष्ट्रिय सम्मेलनमा मयुर नाच देखाउने भन्दै विद्यार्थीहरुलाइ परिक्षा छुटाएर शुक्रबार सदरमुकाम खलंगामा लगेकाे खुलेकाे हाे । अहिले दार्मा गाउँपालिका भित्र कक्षा १ देखि ९ सम्म गाउँपालिका स्तरीय परिक्षा संचालन भैरहेकाे छ । शुक्रबार विज्ञान र हाम्राे दार्मा स्थानीय पाठ्य पुस्तककाे परिक्षा थियाे । उक्त परिक्षा छाेडेर कक्षा ९ र कक्षा ८ का विद्यार्थी एमालेकाे कार्यक्रममा मयुर नाच देखाउन खलंगा गएकाे स्थानीय अविभावक मदन चन्दले बताए । विद्यार्थीहरु परिक्षा छाेडेरै नाच्न गएपछि शुक्रबार गाउँपालिकाकाे शिक्षा शाखाले पनि अनुगमन गरेकाे छ । अनुगमनका क्रममा कक्षा १० का ३ जना, कक्षा ९ मा ३ जना र कक्षा ८ मा एकजना विद्या
Jan42022 by Bibek PoudelNo Comments
घुम्नका लागि दुबई जाने जो कोही बुर्ज खा लिफा चढेर मा त्र फ-र्कन्छन्। नभए, यो टावर-लाई पृष्ठ`भूमि पारेर फो टो खिचा-उन त प्राय: कसैले छोड्दै’नन्।विख्यात अ मे रिकी आर्कि-टेक्ट एड्रिन स्मिथले लिली नामक पुत ली -बाट प्रभा-वित भएर यसको डि;जाइन गरेका थिए। उक्त पुतली-को लय र संरचना बुर्ज खालिफा-सँग मिल् दो-जु ल्दो भएको स्मिथले बताए:का छन्। युएईको दुबई-स्थित विश्वकै सबै-भन्दा अग्लो मानव नि र्मि त टावर बुर्ज खालि फा अहिले मध्य-पूर्वको व्यापा -रि क केन्द्र बनेको छ। बुर्ज खालि-फाको डिजाइन-अनुसार होटल, कार्या-लयदेखि अन्य व्यव;सायिक घराना त्यहाँ बसेका छन्। काठमाडौं । उत्तराखण्डका गभर्नर लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरमित सिंहले भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग गुंजी, नाबी र कुट्टी क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका अवसरमा सिंहले सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीसँग भेट गरेका थिए । बोडर रोड
Dec302021 by Bibek PoudelNo Comments
बिना मगरका छोरा पढ्छन् नेपालकै महँगो स्कुलमा, एक महिनाकै शुल्क सुन्दा होश उड्न सक्छ !
काठमाडौं, मासिक ५० हजार शुल्क लाग्ने ललितपुरको युलेन्स स्कुलमा नाति पढाइरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै अगाडि कार्यकर्ताले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा बुधबार कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि यो नियम लागू हुनुपर्ने माग गरे । पार्टीलाई गाउँ फर्काउने र जनमुखी बनाउने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको विरासत कायम राख्ने र अरू सबै राजनीतिक दलभन्दा भिन्न बन्ने उद्घोष गरेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकर्ताको यो माग ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । युलेन्स स्कुलमा स्व. प्रकाश दाहाल र पूर्वमन्त्री विना मगरका ६ वर्षे छोरा कक्षा २ मा पढ्छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदामाथिको समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यले
Dec262021 by Bibek PoudelNo Comments
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका २ का पुर्व प्रहरी हल्दार गोपाल जोगिकी श्रीमती गंगा जोगि नेपालगन्ज घर भएका शुरेस चौधरी लिएर फरार भएका छन । सुरेश वैदेशिक रोजगारीमा दुबै बस्दै आएका थिए । उनले गंगालाई दुबैबाट पहिले पनि आईफोन पठाईदिएका थिए । गंगाका १२ वर्षको छोरा समेत छन । गंगा श्रीमान गोपाल र १२ वर्षका छोरालाई छोडेर सुरेश चौधरीसँग भागेको श्रीमान गोपालले बताएका छन । उनिहरुको पहिलेदेखी नै कुराकानी हुने गरेको खुलेको छ । गंगा पुस ५ गते १० बजे घर छोडेर सुरेश सँग फरार भएको श्रीमान गोपाल बताउँछन । गंगाको भेट सुरेशसगँ पप्जि खेल्ने क्रममा भएको गोपालले बताएका छन । पप्जि खेल्ने क्रममा भेट भए पछि सुरेश र गंगाबीच बिस्तारै अन्य सआमाजिक संजालमा कुराकानी हुने गरेको थियो । तर त्यसबारेमा आफुलाई पछि मात्र थाहा भएको गोपाल बताउँछन् । गंगाले श्रीमान गोपालसँग आइफोन पनि किनि मागेको गोपालले बताए । आफु